Maxaa kasoo kordhay xaaladda Sanches iyo Ozil?
Friday, October 19th, 2018 - 13:42:05
Saturday January 13, 2018 - 13:13:02 in Wararka by Hussein Hadafow
Arsenal ayaa kalsooni ku qabta inay qandaraaska u dheereynayaan mustaqbalka Mesut Ozil, inkastoo qandaraaskiisa uu dhacayo bisha June.
Inkastoo tababare Arsene Wenger uu aqbalay inaysan u badnayn Alexis Sánchez inuu sii joogi doono kooxda. wadahadaladu waxa ay ku sii socdaan Ozil heshiis cusub, kooxdana waa ay ka sii fiicnaan laheyd xilliga bilowga xilli ciyaareedka.
Iyadoo Jack Wilshere uu qandaraaska u cusbooneysiiysay Arsenal. "Waxay u egtahay Sánchez ma kordhin doonto qandaraaskiisa Arsenal" ayuu yiri Wenger. "Laakiin waxaan dooneynaa inaan heysano Jack iyo hadii aan fursad u heysano inaan sii joogno Ozil, dib u dhisku wuxuu noqon doonaa mid ka hooseeya seddexda ciyaaryahan ee ka haray."
Wenger ayaa sheegay in wadahadaladii Ozil uu ahaayeen kuwa aad u badan, islamarkaana uu weli fursad u yahay inuu sii joogo.
Ozil Waxaa lala xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo Manchester United, halkaasoo Jose Mourinho uu doonayo inuu mar kale la shaqeeyo kubadsameeyaha kadib markii uu maamulayay waqtigii uu joogay Real Madrid.
Özil ayaa seegay labadii kulan ee ugu dambeysay ee kooxdiisa dhaawacyo dartiis, laakiin waxa uu ku laaban karaa kooxdiisa kulanka ay Axada la ciyaarayaan Bournemouth oo ka dhici doonta garoonka Vitality Stadium.
W/D: Issa Macaanow